Padman – Page 3 – Filimside.net
Qiyaasta xili hore filimka Padman iyo maalintiisa 5-aad ganacsiga uu sameeyay
February 13, 2018 Zakarie Abdi
Superstar Akshay Kumar filimkiisa Padman ayaa sare u kac macquul ah sameeyay ganacsigiisa maalinta shanaad asigoo ka faa’iideestay feestada MahaShivaratri ee gobolada Hindiya qaar looga dabaal dagayay. Padman maanta subaxdii hore wuxuu ku furmay 20% asigoo xiligii […]
Day 5 Update: filimka Padman iyo maalintiisa 5-aad sida uu ku furmay subaxdii iyo duhurka xiliga Hindiya
Filimka Padman ayaa maanta oo Talaado ah ka bilaabasho wanaagsan shalay oo Isniin ahayd taasi oo muujineyso inuu maanta ganacsigiisa fiicnaan doono madaama gobolada qaar Hindiya fasaxyo ka jiraan. Padman ayaa ku furmay maanta 20% subaxdii hore […]
Rasmi: Padman iyo Isniintiisa kowaad ganacsiga uu sameeyay
Superstar Akshay Kumar filimkiisa Padman ayaa is celiyay Isniintiisa kowaad asigoo sameeyay 40% ilaa 45% hoos u dhac ah. Padman ayaa keenay 5.75 Crore isniintiisa kowaad sida shabakada BOI soo daabacday. Padman mudo afar maalmood […]
Filimka Padman fiidkan halka uu maraayo iyo Isniintiisa kowaad ganacsiga uu sameyn karo qiyaas ahaan
February 12, 2018 Zakarie Abdi
Superstar Akshay Kumar filimkiisa Padman ayaa maalintiisa 4-aad tiyaatarada saaran waxaana lasoo bandhigay fiidkan halka uu maraayo iyo Isniintiisa kowaad ganacsiga laga filan karo qiyaas ahaan. Akki filimkiisa maanta subaxdii hore wuxuu ku furmay 20% asigoo xiligii […]
Day 4 Update: Filimka Padman sida uu maanta ku furmay iyo halka uu duhurkaan maraayo
Filimka Padman ayaa si dhex dhexaad ah oo is celin wacan ka muuqato ku furmay maalintiisa afaraad ee uu tiyaatarada saaran yahay. Maanta oo Isniin ah sidoo kalena maalin shaqo ah wuxuu Padman ku furmay 20% waana […]
Rasmi: filimka Padman iyo sedexdiisa maalmood ee ugu horeyso ganacsiga uu sameeyay
Superstar Akshay Kumar filimkiisa Padman ayaa ganacsi wacan sameeya sedexdiisa maalmood ee ugu horeyso inkastoo Jimcadii uu ganacsi dhex dhexaad ah sameeyay hadana sabtigii 35% ayuu sameeyay halka axadii uu sameeyay 20% sare u kac […]
Qiyaasta xili hore: Padman Axadiisa kowaad si wacan ayuu u gadmay
Superstar Akshay Kumar filimkiisa ayaa maanta ganacs adag sameenayo wuxuuna ka faa’iideestay inay Axad oo shaqada laga nasanaayo. Padman ayaa maanta sare u kac xoogan sameeyay waana hubaal in ganacsigiisii sabtiga uu ka sareyn doono […]
Day 3 Update: Padman sida uu maanta ku furmay iyo duhurkan halka uu maraayo maalin wanaagsan ayay u tahay
Superstar Akshay Kumar filimkiisa Padman ayaa markale sare u kac wacan sameeyay Axadiisa kowaad ama maalintiisa sadexaad ee uu tiyaatarada saaran yahay. Padman ayaa ku furmay maanta subaxdii hore 45% ilaa 50% waana bilaabasho heer sare ah marka […]
Superstar Akshay Kumar filimkiisa Padman ayaa 35% sare u kac sameeyay maalintiisa labaad wuxuuna keenay 13.50 Crore asigoo mudo labo maalmood ah soo xareeyay 23.50 Crore (Trade Figure). Ma jiraan filimo badan oo maalintooda labaad sare u kac […]
BOI: filimka Padman oo sare u kac xoogan sameeyay maalintiisa labaad subaxdii hore iyo xiliga duhurka
February 10, 2018 Zakarie Abdi
Superstar Akshay Kumar filimkiisa Padman sidii la filaayay maanta oo sabti ah sare u kac xoogan ayuu sameeyay sidoo kalena daawadayaal aad u fara badan ayaa tiyaatarada soo aadeen. Padman ayaa maanta subaxdii hore ku […]